George Redhawk dia mampiseho ny kantony amin'ireto GIF tsy misy fetra tsy voafetra | Famoronana an-tserasera
Ireo GIF momba ny zavakanto sy tsy manam-petra an'i George Redhawk
Tamin'ity herinandro ity dia nanana ohatra tsara momba izay azo tratrarina isika hatao amin'ny GIF mihetsika miaraka amina loop tsy manam-petra avy amin'ny mpanakanto sary Haha PouPou ary ilay Star Wars Sonata. Fanehoan-java-kanto izay manana habaka bebe kokoa hatrany noho ireo fahatsapana atolotray ao anatin'ilay tadiny tsy manam-petra izay mitondra antsika any amin'ny toerana hafa.
George Redhawk no mpanakanto miandraikitra ireo GIF mihetsika izay hitanao zaraina eto ary ataony na dia jamba ara-dalàna aza izy. Ireo olona manana a fahitana latsaky ny 20/200, izay milaza fa ity zava-kanto hitan'i Redhawk ity dia mitaky tanjaka bebe kokoa sy fahagagana lehibe kokoa.
GIF vitsivitsy mihetsika miaraka amina loop tsy manam-petra izay maneho amintsika io format io ho a fomba tsara hanehoana hevitra hafa sy foto-kevitra hafa. Ao anatin'ny segondra dia afaka mamela antsika tsy mahita bika eo amin'ny efijery izy io nefa tsy mieritreritra zavatra hafa ankoatry ny hetsika izay mitranga tsy misy fetra eo alohantsika. Toy ny hoe nisambotra antsika tsy nahalala firy ny fotoana.
Redhawk dia miasa tsara amin'ireo GIF mihetsika izay avelao izahay hanintona ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Satria manana vesatra mavesatra izy ireo entina manafatra ity pejy ity dia afaka mahita vitsivitsy hafa ianao amin'ity rohy mivantana ity Imgur.
Fanehoana kanto samihafa amin'ny fisehoana samihafa izay mifantoka amin'ny hetsika maharitra iray amin'ireo GIF mihetsika izay, ankoatry ny fanompoana mba hampisehoana amintsika ny seho mahatsikaiky indrindra saka, alika na biby, dia mahita ny fifantohany avy amin'ireo mpanakanto sasany mitady fomba hafa hanehoana ny fomba fahitany an'izao tontolo izao.
Redhawk dia naneho hevitra tao amin'ny tantaram-piainany manokana izay noho ny fanodikodinam-sary natombony mitady fomba iray hanehoana an'izao tontolo izao tahaka ny fahitany azy tamin'ny fahitany simba. Fomba fijery mahaliana avy amin'ity mpanakanto ity izay azonao alalana ny Google+ anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo GIF momba ny zavakanto sy tsy manam-petra an'i George Redhawk